ပြည်တွင်းရှိ တရုတ်ပြည်နယ် ချမ်းသာမှုကို လုယက် ဖို့၊ ဒီမို ကျောင်းသားပညာရေး သပိတ် အာရုံလွှဲဖို့၊ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေ ဖို့၊ တချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ် အနေနဲ့ ယခု စစ်ပွဲ က ပြုမူ လုပ်ဆောင် ချကျွေးနေသလား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဖုန်ကြားရှင်မှ တစ်ကမ္ဘာလုံးက တရုတ်တွေကို လိပ်မူရေးသားထားတဲ့ စာထဲမှာ ငိုပွဲချထားပါတယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်တံခါးဟောင်းကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးက ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ဖြင့် လေလံအောင် »
လတ်တလော ဖတ်မိတဲ့ သတင်းတွေထဲက
လောက်ကိုင် အခြေအနေ အချို့ကနေကြည့်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်ကနေ ၁၅ ရက်အတွင်း
လောက်ကိုင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ပေါင်း ထောင်နဲ
့ချီ ရှိနေပြီး မန္တလေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ အသင်း
အဖွဲ့တွေ အကူအညီနဲ့ ဒေသရင်းကို ဆက်လက်
လောက်ကိုင်မြို့ထဲမှာ လူသူကင်းမဲ့ ခြောက်
ကပ်နေပြီး အိမ်တံခါးတွေပိတ် ပုန်းအောင်း
နေသူတချို့ ရှိနေပေမယ့် အများစုကတော့
တရုတ်နဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ ထွက်ပြေးနေကြ
မဆိုင်သူ အရပ်သား အများအပြားလည်း
အဖမ်းခံရပြီး အချို့ဆို လမ်းမပေါ်မှာတင်
လားရှိုးမြို့ကို ရောက်လာတဲ့ ကြံစိုက်တောင်သူ
တဦးက “ဟိုမှာ ညလည်း တိုက်ပွဲဖြစ်တာပဲ၊
တော့ အကုန်လုံးဖောက်ထားပြီ၊ ပြေးတဲ့သူ
တွေ ပြေးကုန်ုပြီဆိုတော့ လူမရှိတော့ဘူး။
ရှိတဲ့ဥစ္စာလည်း သူတို့ဖောက်ပြီး ယူသွားကြ
တယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဟာ ကြံစိုက်တောင်သူတွေနဲ့ ပန်းရံလုပ်တဲ့
အလုပ်သမားတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ လားရှိုး
မှာ တထောက်နားပြီး မန္တလေးမြို့ကို ကားနဲ့
အများစုဟာ မြေလတ်ဒေသ တောင်တွင်းကြီး
ဘက်က ဖြစ်ပြီး ပုသိမ်၊ မြန်အောင် စတဲ့ ဧရာ
မင်းအောင်လှိုင်လည်း လားရှိုးကို ရောက်နေပြီး
ပြင်ဆင်ထားပါ။ ငါတို့ကတော့ ဘာမှ မလျော့ပါ
ဘူး” လို့ ပြောကြောင်း ဧရာဝတီမှာ ဖတ်ရပါ
အခြေအနေက နှစ်ဖက်စလုံး တင်းမာနေဆဲ
လို့ ယေဘူယျ သုံးသပ်လို့ ရပေမယ့် တဖက်
တည်းက တင်းမာလွန်းနေတယ်တောင် သုံး
သပ်လို့ ရနိုင်မယ် ထင်တယ်။
ဒီနေရာမှာ အလျင်းသင့်လို့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
က ကိုးကန့်ဒေသမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်း
ကိုးကန့်ဒေသကို ဗမာစစ်တပ်က ၀င်စီးပြီး
တွေ နစ်နာဆုံးရှုံးရတဲ့ကိစ္စမှာ လျော်ကြေး
ဒေါ်လာ သန်း (၄၀) ကျော်ပေးဖို့ ယူနန်
ဘက်က တောင်းထားကြောင်း အဲဒီအချိန်
တကယ်တော့ ကိုးကန့်နဲ့ ‘ဝ’ ဒေသကို မြန်မာ
ကိုးကန့်အဖွဲ့နဲ့ ဗမာစစ်အစိုးရ ပထမဆုံးအပစ်
အခတ် ရပ်စဲနိုင်အောင် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်
ပေးသူ ဘိန်းမှောင်ခိုဟောင်း လော်စစ်ဟန်
ကိုးကန့်နယ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးပွား
ရေး လုပ်ခွင့်ရတာဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရတဲ့
အကြောင်းတခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စာချုပ်
လောက်နဲ့ နားလည်မှု ယူထားတာဖြစ်လို့
မြန်မာပြည်ထဲ ယူနန်တရုတ်ဝင်နေတာ နှစ်ပေါင်း
ထောင်ချီနေပါပြီ။ ယူနန်နဲ့ အထက် မြန်မာပြည်
ဆက်နေတာမို့ ယူနန်မှာ အပြောင်းအလဲဖြစ်တိုင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂,၀၀၀) ကျော် ယူနန်မှာကြီးစိုး
တဲ့ နန်ကျောင်က ဝင်င်တိုက်တဲ့အတွက် ပျူနိုင်ငံ
တရုတ်ပြည်မှာ မွန်ဂိုအာဏာရပြီး ယူနန်အထိ
အာဏာစက် ချဲ့လာတဲ့အခါ မြန်မာနဲ့ထိတွေ့ပြီး
(၁၃) ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာမွန်ဂို ဝင်တိုက်တဲ့အတွက်
နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ ပုဂံပြည်ပျက်စီးခဲ့
အဲဒီနောက် ရှမ်းမျိုးနွယ်တည်ထောင်တဲ့ အင်းဝ
နန်းဆက် အနှစ် တရာကျော်မှာ ယူနန်-မြန်မာ
ကုန်သွယ်ရေး စတင်တယ်လို့ သမိုင်းဆရာတွေ
(၁၇) ရာစုမှာ တရုတ် ‘မင်’ မင်းဆက်ကို မန်းချူးချင်
က ဖြုတ်ချတဲ့အခါ နောက်ဆုံး ‘မင်’ မင်းဆက်ဖြစ်သူ
‘ယုံလီ’ မင်း မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်ရောက်ခိုလှုံတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ‘မင်’ မင်းဆက်ကို လိုလားတဲ့ မြန်မာပြည်
ရောက် တရုတ်တွေ စခန်းထကြတဲ့အတွက် တိုင်းရေး
နောက်ဆုံး တရုတ်စစ်တပ်ကြီး အင်းဝမြို့အထိ ချီတက်
လာလို့ ‘ယုံလီ’ မင်းကို အပ်နှင်းလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်
ယုံလီမင်းရဲ့ ကိုယ်ရံတော်တပ်ဖွဲ့ဟာ ကိုးကန့်ဒေသမှာ
(၁၇) ရာစုနှောင်းပိုင်းကစပြီး ကိုးကန့်တရုတ်ရယ်လို့
ကြာလှပါပြီ။ ကိုးကန့်တရုတ်ကို တောင်ပေါ်တရုတ်လို့
(၁၄) ရာစုလောက်ကတည်းက မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းကို
ယူနန်တရုတ်က မျက်စိကျခဲ့တာပါ။ (၁၈) ရာစုနှောင်း
ပိုင်း ဆင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက် (၁၇၆၃-၁၇၇၆) တရုတ်
-မြန်မာ နယ်ခြားစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားတာဟာ ယူနန်-မြန်မာ
ကုန်သွယ်ရေး တိုးပွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။
(၁၉) ရာစုမှာ အမရပူရအခြေစိုက် ယူနန်တရုတ်က
၀ါဂွမ်းနဲ့ကျောက်မျက်ကို ယူနန်ကို တင်ပို့ပြီး ပိုးချည်
ရွှေငွေနဲ့ သတ္တုအိုးခွက်ကို ယူနန်က တင်သွင်းပါ
သေဆုံးသူ တရုတ်ကုန်သည် (၆,၀၀၀) ကျော်ရဲ့
မိုးကောင်းကို ဗဟိုပြုပြီး ကုန်သွယ်ရာမှာ ကချင်
လူမျိုးကို ကျောက်တွင်းပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်တာ
ကို ဗမာမင်းက မကန့်ကွက်ပါဘူး။
ကို ယူနန်သားတွေ ကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ ကုန်းကြောင်း
ခရီးကြမ်းမှာ လားတန်းနဲ့လိုက်ပါတဲ့ ယူနန်သားကို
‘လားတရုတ်’ လို့ အညာမှာ ခေါ်တယ်။
ယူနန်-မြန်မာ-လာအိုနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအကြား ရာစုနှစ်
အတော်ကြာ လားတန်းနဲ့ ကုန်သွယ်တုန်း ယူနန်ကို
ယူနန်က ဘိန်းစိုက်တဲ့ဓလေ့ကို ကိုးကန့်က အမွေ
ဆက်ခံတာပါ။ အရှေ့အိန္ဒိယ အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီဟာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘင်္ဂလားပြည်နယ်မှာ စိုက်သမျှဘိန်း
ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဝယ်ယူပြီး တရုတ်ပြည်ကို တင်
တပြည်လုံးဘိန်းစားဖြစ်ကုန်မှာ စိုးလို့ တရုတ်အစိုးရ
က ဘိန်းတင်သွင်းခွင့် ပိတ်လိုက်တော့ (၁၉) ရာစုမှာ
တရုတ်ကစစ်ရှုံးတော့ ဘိန်းရောင်းဝယ်မှု တိုးပွား
လာတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာပါ ဘိန်းစိုက်ပျိုးလာတာ
မို့ ဘုရင် စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး သမ္မနိုင်ငံထူထောင်
တဲ့ ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်ဟာ ဘိန်းတန်ချိန်
(၂၂,၀၀၀) ကျော် ထုတ်လုပ်နေပါပြီ။
ယူနန်ပြည်နယ်က ဘိန်းစိုက်တဲ့ဓလေ့ဟာ အိမ်နီးချင်း
ဒေသတွေအထိ ပျံ့နှံ့လာတာမို့ မြန်မာနယ်စပ် ကိုးကန့်
နဲ့ ဝ ဒေသမှာ (၁၉) ရာစုနှောင်းပိုင်းကတည်းက အကြီး
စာရေးဆရာရွှေရိုးအမည်ခံ James George Scott
အဲဒီဒေသကို ခရီးထွက်စဉ်က ဘိန်းခင်းတွေများလွန်း
လို့ ရက်အတော်ကြာခရီးသွားတာတောင် ဘိန်းခင်း
တွေက မဆုံးသေးဘူးလို့ ရေးထားတယ်။
၁၉၃၀ ခုနှစ်မှာ ကူမင်တန်တရုတ်အစိုးရက တရုတ်ပြည်
မှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပိတ်ပင်လိုက်တဲအခါမှာ တရုတ်ကုန်
သည်တွေဟာ ကိုးကန့်နဲ့ ၀ဒေသက ထွက်တဲ့ဘိန်းကို
မှာသာ ဘိန်းစိုက်ခွင့်ပြုပြီး ပုံမှန်ဝယ်ယူလေ့ရှိပေမယ့် သံ
ပါတယ်။ အထက်မြန်မာပြည်က ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်
၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပြည်တွင်း
စစ် စတင်ဖြစ်ပွားတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် ပြီး
စစ်ရှုံးတဲ့ တရုတ်ကူမင်တန်တပ်အချို့ ရှမ်းပြည်အရှေ့
ပိုင်းဒေသမှာ ၀င်ရောက်ခြေကုပ်ယူပြီး တရုတ်ကွန်မြူ
နစ်ကို ပြန်တိုက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ နောက်ပိုင်း
ဘိန်းလုပ်ငန်းဟာ အဓိက အရေးပါလာပါတယ်။
တပ်ကြီးကို ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါတယ်။
လက်နက်ခဲယမ်းကို ထိုင်ဝမ်က တိုက်ရိုက်ပို့ပေးပြီး
ကုန်ကျစရိတ်ကိုတော့ ဘိန်းလုပ်ငန်းက ရတဲ့ငွေနဲ့
ကူမင်တန်တပ်တွေဟာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်လောက်အထိ
ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လှုပ်ရှားသွားတာမို့ ဘိန်းလုပ်ငန်း
ကွန်မြူနစ် တရုတ်ပြည်မှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးဖို့ ခက်ခဲလေ
လေ ရှမ်းပြည်က ဘိန်းလုပ်ငန်းလည်း ကြီးထွားလေ
ယူနန်နယ်သားအများအပြား မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်
ရောက်ခိုလှုံပြန်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မွတ်စလင်
တရုတ်နဲ့ မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ KMT တရုတ်ဆိုပြီး
KMT တရုတ်လို့ ခေါ်တာပါပဲ။ KMT တပ် ထိုင်ဝမ်
နိုင်ငံကို ရွှေ့ပြောင်းတော့လည်း လိုက်သွားသူက
နည်းနည်း၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အခြေချသူများ
က များပါတယ်။ ဘိန်းဖြူနဲ့ ကျောက်မျက်မှောင်ခို
ဒီနေရာမှာ ယူနန် တရုတ်လို့ပြောပေမယ့် ကိုးကန့်
တရုတ်၊ ‘ဝ’တရုတ်၊ KMT တရုတ်၊ ပန်းသေးတရုတ်
စတဲ့ တရုတ်အားလုံး အကျုံးဝင်တယ်။ လောစစ်ဟန်၊
လောစစ်မင်း၊ ဖုန်ကြားရှင်၊ ဖုန်ကြားဖူး၊ ပေါက်ယူချမ်း၊
လင်မင်းရှန်၊ ခွန်ဆာ (ခေါ်) ချန်ရှီဖူး၊ ဝေဆူကိုင်စတဲ့
ငွေရင်းရှိတဲ့တရုတ်ဟာ သူတို့နဲ့ဆက်ပြီး စီးပွားရေး
တရုတ်က မဆလ စစ်ဗိုလ်ကို လာဘ်ထိုးပြီး စီး
ဗမာ စစ်ဗိုလ်ကို လာဘ်ထိုးပြီး စီးပွားရေးလုပ်တာ
တရုတ်ထုံးစံဖြစ်နေပြီ။ ဗမာစစ်တပ်ကို ဆက်ကြေး
မှန်မှန်ပေးနေရင် တရုတ်ပြည်နယ်ဟာ ကြီးပွားချမ်း
သာဖို့သာ ရှိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေမှာ
ပြည်တွင်းရှိ တရုတ်ပြည်နယ် ချမ်းသာမှုကို လုယက်
ဖို့၊ ဒီမို ကျောင်းသားပညာရေး သပိတ် အာရုံလွှဲဖို့၊
လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေ
ဖို့၊ တချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ် အနေနဲ့ ယခု စစ်ပွဲ
က ပြုမူ လုပ်ဆောင် ချကျွေးနေသလား ဆိုတာတော့
ကာယကံရှင် စစ်အစိုးရဖြစ်တဲ့ ဗမာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ
၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅။
This entry was posted on February 16, 2015 at 7:03 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.